सोमवार, असार २०, २०७९ ०१:३९:२६ युनिकोड
अहिले सम्म कहाँ–कहाँ फले ?
५ पुष , एजेन्सी ।
तरकारी र फलफुल हाम्रो लागी पोषणको स्रोत हुन् । तर यीनै तरकारी र फलफुल कहिले काहि रोचक र अचम्मित हुने गरी फल्छन् । किनकि जब यी बढ्दै जान्छन् यिनीहरुको आकारमा पनि परिर्वतन हुदै जान्छ । एकै ठाउँमा रोपिएको तरकारी र एउटै बोटमा फलेका फलफूलको आकार फरक त हुन्छन् नै यसको बनावट अनौठो र अचम्मित पार्ने खालको पनि छ । विश्वमा यस्ता ठाँउहरु छन् । जहाँ यस्ता अनौठा र रोचक फलफुल तथा तरकारी फलेका छन् ।
१. सखरखण्ड स् सखरखण्डलाई शरीरमा उर्जाको स्रोत मानिन्छ । यसलाई कन्दमूलका रुपमा पनि हेरिन्छ जाडोमा कन्दमूल खाँदा शरीरमा ताप उत्पन्न हुन्न भन्ने गरिन्छ । यसमा क्यालोरीको मात्रा पनि धेरै हुन्छ । यो प्राय विश्वका धेरै देशमा फल्छ । हामीले धेरै ठुलो सखरखण्ड देखेका छैनौ । तर लेवनानका एक किसानले सबैलाई अचम्मित पार्ने खालको सखरखण्ड फलाएका छन् । उनले फलाएको एउटै सखरखण्ड झण्डै साढे ११ किलोको रहेको छ । अरु सखरखण्डका तुलनामा त्यो एउटा मात्रै यस्तो सखरखण्ड थियो जुन सबैभन्दा ठुलो र अचम्मीत पार्ने खालको थियो । किसान भन्छन् त्यो सखरखण्ड न हाइब्रेट हो न त्यसमा छुट्टै मल प्रयोग गरिएको हो । यो सखरखण्ड विश्व रेकर्डमा आज सम्मकै सबैभन्दा ठुलो सखरखण्ड हो ।
२. रुखकटहर : यो यस्तो फल हो जुन जहाँ पनि सजिलै पाउन सकिन्छ । भारतीय यसको उतपादन धेरै हुने गरेको छ । नेपालमा पनि यसको खुबै खपत हुने गर्दछ । यसलाई फलफुल र तरकारी दुबैको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । कलिलो हुँदा मिठो तरकारीको रुपमा प्रपोग गर्न सकिन्छ भने ठुलो भएर पाकेपछि मिठो फलको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । भारतको महाराष्ट्रमा एक किसानले आफ्नो बगैचामा ४२ किलाको कटहर फलाएका छन् । यो अहिले सम्मको विश्व रेकर्डमा सबैभन्दा ठुलो कटहर हो ।
३. बन्दाकोभी : अमेरीकाको अलस्का निवासी जोन इभन्स एक जादुगर हुन्,उनले आफ्नो जादुले संसारलाई चकित त बनाएका छन् नै उनले उत्पादन गरेको बन्दाकोपीले पनि विश्व रेकर्ड कायम गरेको छ । उनाले आफ्नो बारीमा ३४ किलो को बन्दाकोभी फलाएर विश्व रेकर्ड राखेका हुन्।
४. खरबुजा : खरबुजा एउटा यस्तो फल हो जसमा प्रसस्त मात्रामा पानी पाइन्छ र यसले गर्मीमा शितलता दिने काम गर्दछ । यसमा भिटाभीन ए , भिटामीन सी , एन्टी अक्सीजन , एमोनोएसीड पाइन्छ जुन मानव स्वास्थ्यका लागी उपयोगी छ । नेपालमा यो सामान्यतया १ किलोदेखि ६ किलोसम्म हामीले देखेका छौं । तर अमेरिकाका एक किसानले १५९ किलोसम्मको खरबुजा फलाएर विश्व रेकर्ड राखेका छन् ।
५. गाजर स् गाजर पनि हाम्रो शरीरका लागि यस्तो उपयोगी चिज हो जसलाई तरकारी र फलफुल दुबैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । गाजरमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर हुने हुँदा यसले तौल कम गर्न मद्दत गर्दछ । बेलायतका पिटर लाजब्रोकले एउटै गाजर साढे १० किलोसम्म फलाएर विश्व रेकर्ड राखेका छन् ।
६. फर्सी : साधारण तया फर्सीलाई तरकारीको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तर पाकेको फर्सीलाई उसीनेर खाने पनि चलन छ । फर्सी स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक पनि मानिन्छ । संसारमा सबैभन्दा ठूलो फर्सी फलाएर जर्मनीका स्टीफ ग्रेडसले संसारलाई चकित बनाएका छन् । उनले फलाएको एउटै फर्सीको तौल ११सय ४६ किलो थियो । जुन आज सम्मकै ठुलो फर्सी हो ।
७. प्याज : प्याज हरेक भान्छामा हरेक दिन प्रयोग हुने कुरा हो । प्याजलाई सलादको रुपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यसका पनि विभिन्न फाइदा छन् । बेलायतका एक किसानले आफ्नो खेतमा साढे ८ लिोको प्याज फलाएका छन् । जसबाट उनले विश्व रेकर्ड राखेका हुन् ।
८. कागती स् कागती एक उपयोगी फल हो । यसमा भिटामीन सी प्रसस्त रुपमा पाइन्छ । यसले स्वास्थ्यलाई फाइदा पुयाउछ । इजरायलका एक किसानले साढे ५ किलोसम्मको एउटा कागती फलाएका छन् । यो अहिले सम्मकै ठूलो कागती हो । जसले विश्व रेकर्ड राखेको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, पुष ५, २०७८, ०३:५५:००
कञ्चनमा महिलाहरुलाई उधमशिल र आत्म निर्भर बनाउन उन्नत बाख्रा बितरण
लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिरको दानपेटिका खोलियो, ४ दिन सम्म पैसा गनिने आइतवार, असार १९, २०७९